Izinja - Thola Online
IStaffordshire Bull Terrier: wazi konke mayelana nokuzalela
Thola ku-Inthanethi Disemba 2, 2019 Izinja Awekho amazwana
IStaffordshire Bull Terrier ifuna inhlonipho nomaphi lapho iya khona. Phambi kobuso bakhe obuthukuthele, abantu abaningi bangacabanga ukuthi "kungcono uqaphele!" Kepha bewazi ukuthi ngaphansi kwale ndlela eqinile…
INewfoundland: zazi konke ngalokhu kuzalanisa
INewfoundland, ekuqaleni, inezinja ezinkulu, ezinamandla, ezinamandla nezinwele. Futhi zinjalo, kepha uma usibona kahle, isici esinobungane nesithulile sisusa noma imuphi umbono omubi. ...
Inkomo yase-Australia: zazi konke ngohlobo lokuzalela
I-Australia Cattle, eyaziwa nangokuthi i-Australia Cattle Inja ne-Blue Heeler, iyisigcini sezimvu esisebenza kanzima futhi esisebenzayo, kodwa futhi sithembekile futhi sihamba nayo. Kukhuliselwe ukukhuthazelela ubunzima ...
Weimaraner: wazi konke mayelana nohlobo
Weimaraner: wazi konke ngomjaho. Yaziwa ngumbala wayo ophuzi kanye namehlo asobala, i-weimaraner iye yabizwa ngokuthi "i-grey ghost" noma "i-ghost yesiliva." Le nja enobuhlakani ...
I-Whippet: zazi konke ngalokhu kuzalaniswa kwenja
I-Whippet: Yazi konke mayelana nalokhu kuzalaniswa kwenja: Okucacile, okudala nokuthandekayo. Ngubani omelana nesiswebhu? Yaziwa ngokuba yisazi kuma-racing, inja yeWhippet i…
I-Yorkshire Terrier: wazi konke mayelana nokuzalela
I-Yorkshire terrier, eyaziwa nangokuthi i-york noma i-yorkie, iyinja enhle yomlingani, ehlakaniphile kakhulu futhi inobuhlakani. Usayizi wabo omncane (izinja zohlobo lokuzala zingaphansi kwama-20 ...
Shih Tzu: wazi konke ngalokhu kuzalaniswa kwenja
Shih Tzu: wazi konke ngalokhu kuzalaniswa kwenja. Ukubukeka okuyisidina, isicwebezela esimfushane nengubo ende yesilika, ejwayelekile kwe-shih tzu, akunakuphikwa futhi sekunqobile ...
Shiba: wazi konke ngohlobo lokuzalwa kwenja
Shiba: Yazi konke ngohlobo lokuzalwa kwenja. Ibukeka njengempungushe, inemisipha kodwa ibhekwa njengencane uma uyiqhathanisa nezinja zakwa-Spitz, i-shiba izokunqoba kuqala ngamehlo ayo ...
UShetland Shepherd: wazi konke mayelana nokuzalela
UShetland Shepherd: wazi konke ngohlanga: Kuyingxube yenjabulo kanye nesibopho (into emangazayo kamuva nje!). Muhle, unesihe futhi uyazi ukuthi uthanda izixuku noma kuphi lapho efuna khona ...
UShar-pei: wazi konke ngohlobo lokuzalwa kwenja
IShar-Pei ingenye yezinhlanga ezinqabile emhlabeni, ngakho-ke ibiphakathi kwamarekhodi eGuinness Book. Okokugoqeka komzimba wakhe nobuso bakhe obunyinyekile, ...